एनआरएनए मनोनयन प्रकरण : नैतिकताको प्रश्न कि बिबेकको खडेरी ? - Nepali Times Australia :: The First Nepali Magazine Published in Australia
एनआरएनए मनोनयन प्रकरण : नैतिकताको प्रश्न कि बिबेकको खडेरी ?
"बिधानमा के लेखेकाे छ भनेर हामीले कसैलाई गुहार्ने कुरा त अन्तिम उपाय होला तर व्यवहारिक रुपमा हेर्दा जिम्मेवार व्यक्तिहरुले के गरेका छन् भन्ने कुराले ज्यादा महत्व राख्छ ।"
-- महेन्द्र कुमार लम्साल / प्रकाशित मिति : मङ्लबार, मंसिर १९, २०७४
एनआरएनए अष्ट्रेलियाको आन्तरिक मामिला फेरी एक पटक आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर पुगेको छ । गत १९ नोभेम्बर आइतबारका दिन एनआरएनए अष्ट्रेलिया राष्ट्रिय समन्वय समितिले दुई पदाधिकारी सहित ६ जना कार्यसमितिका सदस्यहरु मनोनित गर्ने क्रममा यस्तो विवाद बाहिर आएको हो । मनोनयन हामीलाई चित्त बुझेन, समावेसी छैन र एनआरएनएको बिधानको मर्म बिपरित छ भन्ने तर्क पेश गर्दै २ पदाधिकारी सहित ७ कार्यसमितिका सदस्यहरुले आइसिसिको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । यो भन्दा पहिला गत जुनमा सदस्यता यहााको पंजीकृत सदस्यता सम्बन्धि बिबाद फेयर ट्रेडिङसम्म पुगेको र अन्तत: छलफलबाट विवाद सुल्झिएको थियो ।
अनुभवले के देखाउाछ भने जब एनआरएनए तथा अन्य कुनै सामाजिक संघ संस्थाहरुमा पदको सवाल आउछ तब मानिसहरु त्यतिकै जुर्मुराएर उठ्छन। सरोकार नै नभएका मानिसहरु लाई पनि मेरो मान्छे, उसको मान्छे, यताको मान्छे र उताको मान्छे भनेर बिभिन्न कित्ता र ग्रुपमा धकेलिदिन्छन्। यस्तो खाले ग्रुपिज्म अक्सर गरि राजनैतिक आधारमा नै हुने गर्दछ । कहिले काहिा त मानिसहरुको बर्षौ देखिको सम्बन्ध, सामाजिक सहकार्य, सद्भाव पनि पद कै कारणले एकै चोटी गरल्याम गुर्लुम धरासाई हुन पुग्छ । आखिर के हो यो एनआरएनए र पद ? के यो नै संसार हो ? एनआरएनए बिना अरु कुनै प्लेटफर्म नै छैन नेपाल र नेपालीको सेवा गर्न ? किन एनआरएनए नै नभई नहुने ? किन पद मै बस्नु पर्ने ? पद बिना पनि आफ्नो सामाजिक गतिबिधि संचालन गर्न सकिदैन ? अनि पद नपाउादैमा पाउने संग दुश्मनी गर्नै पर्ने हो ? यहानेर एनआरएनए मात्रै होइन विभिन्न नाउमा खुलेका थुप्रै स्थापना गरिएका संघ संस्थाहरु प्रवासमा नेपालीहरु बीच आपसि मनमुटाव, प्रतिशोधको प्रमुख कारण नै बन्ने गरेको छ ।
जिन्दगीको एक मिनेट अमूल्य समय पनि अरुको बारेमा नकारात्मक सोचेर खेर फाल्नु आफ्नै लागि प्रत्युपादक हुन्छ । काम गर्नको लागि, सेवा गर्नको लागि कुनै पद र संस्था मा बस्नका लागि मरिहत्ते गर्नै पर्दैन । पहिचानको लागि पद होइन मान्छेको काम र समाजमा गरेको योगदान नै उसको पहिचान बन्न सक्छ ।
यसले के देखाउछ भने हामी अपरिपक्क्व छौं । हामीमा फराकिलो सोचको र दूरदृष्टिको अभाव छ । बृहत अष्ट्रेलियाको समाजमा केहि नेपालीहरुले संघ संस्था वा एनआरएनएमा पदका लागि गरिने होडबाजीले हामीलाई उन्नति प्रगतितिर कदापि लैजादैन । वरु यस्तो गतिबिधिले उत्पादनमूलक समय र मानिसहरुको सकारात्मक सोच रचनात्मक काम गर्ने बानिलाई नष्ट पारिदिन्छ । यहाँको व्यस्त समय अत्यन्तै मूल्यवान छ । जिन्दगीको एक मिनेट अमूल्य समय पनि अरुको बारेमा नकारात्मक सोचेर खेर फाल्नु आफ्नै लागि प्रत्युपादक हुन्छ । काम गर्नको लागि, सेवा गर्नको लागि कुनै पद र संस्था मा बस्नका लागि मरिहत्ते गर्नै पर्दैन । पहिचानको लागि पद होइन मान्छेको काम र समाजमा गरेको योगदान नै उसको पहिचान बन्न सक्छ ।
जहाँसम्म एनआरएनए अष्ट्रेलियामा हालै उठेको बिबाद आइसिसिसम्म पुगेको कुरा छ यसको स्थापित मूल्य र मान्यता प्रति सम्बन्धित सबै अझ जिम्मेवार हुनु पर्ने देखिन्छ । बिधानमा के लेखेको छ भनेर हामीले कसैलाई गुहार्ने कुरा त अन्तिम उपाय होला तर व्यवहारिक रुपमा हेर्दा जिम्मेवार व्यक्तिहरुले के गरेका छन् भन्ने कुराले ज्यादा महत्व राख्छ । एक त एनआरएनएको अधिवेसन सकिएको एक महिना भित्रै बाकि पदहरुमा मनोनयन गरि, संस्था लाई पूर्णता दिदै चुनाव ताका गरेका बाचाहरु पूरा गरी एनआरएनए अभियानलाई नयाँ उचाईमा पुर्याउन समग्र एनआरएनए कार्यसमिति तथा कार्यदलहरु एक जूट भएर लाग्नु पर्ने थियो त्यो भएन । कार्यसमितिले पूर्णता पाउन पनि करिब ४ महिना लाग्यो र त्यो पनि विवाद रहित हुन सकेन । अबैधानिक नियुक्ति र एकतर्फी निर्णय भन्दै दुई पधाधिकारी लगायत ७ जनाले नोट अफ डिसेन्ट लेखेरै आइसिसिसम्म पुर्याउने स्थिति आयो ।
एनआरएनलाइ बृहत रुपमा बुझ्ने हो भने ४१ सदस्यीय कार्यकारी समिति (टास्कफोर्सहरु बाहेक ) मध्ये ६ जना ( प्रबक्ता, पब्लिक अफिसर र बाँकी ४ जना सदस्यहरु) मनोनित गरिने प्राबधान राखिनुको बिशेष अर्थ छ । बिबिध कारणले निर्वाचनमा जान नमिल्ने र नचाहने तर एनआरएनए अभियान महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने व्यक्तिहरुलाई यो समितिमा समेट्नको लागि नै ६ ओटा पदहरु रिर्जव राखिएको हो । तर व्यवहारमा यस्तो मनोनयन बिधानको मर्म अनुसार र एनआरएनएको भावना अनुसार छ या छैन सम्बन्धित मानिस हरुले बुझुन ? र यस्ता मनोनितहरुले चुनाबी रणनीति संग गरिएको भागबन्डा संग हिसाब मिलान गर्न प्रयोग नगर्दा राम्रो ? यस सन्दर्भमा २०१४ मा तयार पारिएको बिधान मस्यौदालाई बिशेष अधिवेसनले पास गरि पाचौ अधिवेसन संगै एनआरएनए अष्ट्रेलियामा एक संरक्षक परिषदको व्यस्था गरेको थियो । उक्त परिषदमा सबै पूर्व अध्यक्षहरु र समाजमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने थप ४ जना रहने व्यवस्था गरेको थियो । २०१५ को पाँचौ अधिवेनदेखि नै गठन भइ संचालनमा आउन पर्ने संरक्षक परिषद कहाँ पुगेर रोकिएको छ ? एनआरएनए अष्ट्रेलिया अहिलेको कार्यसमिति अनभिज्ञ छ । र माथि उल्लेख गरिएका ६ जना मध्ये २ जना त्यहि संरक्षक परिषदको सिफारिशमा अध्यक्षले मनोनित गर्नु बैधानिक ब्यबस्था छ र त्यसको पालना पनि यहाँ भएजस्तो देखिदैन ।
यसलाई सबैको अपनत्व प्रदान गर्न एकातिर नेतृत्वमा रहेकाहरुले उच्चतम विवेक प्रयोग गर्न चुक्नु हुँदैन भने अर्कोतिर कुनै पदका आकांक्षीहरुले पनि जनभावना र बिधानको मर्म बुझेर आफ्नो बाल हठ त्याग्नु पर्ने हुन्छ ।
नैतिकता र विवेकको यक्ष प्रश्न
सामाजिक संजालमा नेपालको राजनीति र बिकृतिमा टिप्पणी गरेर नथाक्ने मानिसहरु यहाँ आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्न बिर्से जस्तो देखिन्छ । एनआरएनए आइसीसिको आठौं अधिवेशनबाट निर्वाचनमा उठेका र हारेका व्यक्तिहरुलाई पुन: त्यही कार्यसमितिमा मनोनित गर्न नहुने कुरा फ्लोरबाट सर्वसम्मत पास भएको थियो । कार्य समिति भनेको स‌ंस्थाको भावी कार्यक्रम तथा नीति निर्माणमा निर्णय लिने एक महत्वपूर्ण अंग हो । त्यस्तो भूमिकामा निर्वाचनमा पराजय भएका मानिसहरुलाई भन्दा अन्य क्षमतावान व्यक्तिहरु लाई ल्याउँदा संस्थालाई राम्रो हुने सोचेरै यस्तो प्राबधान ल्याईएको कुरामा दुई मत छैन । तैपनि त्यस्ता मानिसहरु विलक्षण प्रतिभाका रहेछन् र संस्थामा सहभागी गराउनै पर्ने हो भने उनीहरुलाई बिभिन्न समिति र कार्यदलमा समेटेर लैजान भने बिधानले छेकबार गरेको थिएन । तर एनआरएनए अष्ट्रेलियाको हालै भएको कार्यसमितिमा थप सदस्यहरु तथा पदाधिकारीहरु मनोनित प्रकरणमा यसको खुलेरै अबज्ञा गरेकोले आँफूले “नोट अफ डिसेन्ट” लेखेको कुरा एक सदस्यले बताए ।
अन्त्यमा, एनआरएनएको सर्बोपरी हितको लागि बिधानमा गरिने समयानुसार सुधारका लागि महाधिवेसनले दिएको जनादेशको अक्षरश: पालना गर्नु जरुरी छ । एनआरएनए जस्तो डायस्पोरामा रहेका लाखौं नेपालीहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने यति बिशाल सामाजिक अभियानलाई एउटा जनमुखी, गतिशील र मर्यादित बनाउन हामी सबैले मिलेर काम गर्नु पर्ने हुन्छ । यसलाई सबैको अपनत्व प्रदान गर्न एकातिर नेतृत्वमा रहेकाहरुले उच्चतम विवेक प्रयोग गर्न चुक्नु हुँदैन भने अर्कोतिर कुनै पदका आकांक्षीहरुले पनि जनभावना र बिधानको मर्म बुझेर आफ्नो बाल हठ त्याग्नु पर्ने हुन्छ । खोजेको पद पाइन भन्दैमा ‘बा, मलाई त्यै केटी चाहिन्छ’ भने जस्तो गरि रुनु हुँदैन, जिद्धि गर्नु हुदैन । एनआरएनए आफ्नो मूल्य र मान्यता अनुसार चल्यो भने यसमा बसेर काम गर्ने अवसर सबैलाई छ । यसलाई आफ्नो प्रतिष्ठा संग जोडेर हेर्नु हुदैन, हतार गर्नु र हतास हुनु पर्दैन ।